Hexagonal Waya ntupu, ịghasa Ntu, kpaliri Concrete Ntu - YouYou
Weld waya ntupu
DRYWALL studs adịchaghị anwansi ma too ogologo na ndụ anyị kwa ụbọchị. A na-ejibu ha eme ụlọ na ụlọ injinịa dị elu, mana ugbu a ha bụkwa otu n'ime ihe eji eme ụlọ, dịka ọmụmaatụ, anyị ga-edozi ihe na ndụ anyị kwa ụbọchị. Na ofu ihe tupu anyị eme n ...
Site na mmepe nke teknụzụ na-aga n'ihu, ahịrị galvanized n'afọ ndị na-adịbeghị anya nwere mmepe ọhụrụ, Galvanized line ntoputa nke ikpo ọkụ ọkụ na-eweghachi usoro, na ụfọdụ usoro mmepụta. Mmiri na-ekpo ọkụ nke na-enwu ọkụ na-enwu ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, mmanụ ọkụ nke radiant tube na-agba g ...
Usoro mmepụta ntu bụ tumadi ịbịaru, isi oyi, ịkpụcha na usoro ndị ọzọ. Ntuputa akụrụngwa bụ diski, ya bụ, diski nke igwe, mgbe ị na-adọta waya, dọpụta dayameta nke Ntu Rod, na mgbe isi oyi, ọdụ ntu na isi, wee mechaa, nke ahụ na-emecha ...